YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, March 26
တီဗီ မှာ presenter လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေး ကို လက်ထိပ်ခတ်ရုံမကသံကြိုးနဲ့ပါထပ်ချီထား
တီဗီ programmer တစ်ခုမှာ presenter လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်းကို
ကြားခဲ့တာကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။
ဇာတ်လမ်းတိုရိုက်ကူးရေးမှာ သူကိုပါဝင်ဖို့ဆိုပြီး သူဌေးက ဇာတ်ညွှန်းမိတ္တူ တစ်ခုပေးလိုက်တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲတလောမှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူလည်း သူချစ်သူနဲ့ ခိုးရာလိုက်သွားတယ်။.
အဲအချိန်မှာ ဇာတ်ညွှန်းမိတ္တူကိစ္စကိုသူလည်း မေ့နေလောက်ရောပေါ့...
စခန်းလည်းရောက်ကော စခန်းမှုးက ဘာမှမပြောပဲ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး အချုပ်ထဲ တန်းထည့်လိုက်ရော..
စခန်းမှုးကဇာတ်ညွှန်း မိတ္တူ ပါသွားလို့ဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်...
အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့စာရွက်တွေကလည်း ချတွေလည်းစား အရေးမကြီးလောက်ဘူးဆိုပြီး
တကယ်ဆို ဇာတ်ညွှန်းက မှုရင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး.. မိတ္တူ ပါ..
ဒီနေ့နဲ့ဆို အချုပ် မှာ ၁ပတ်ရှိသွားပါပြီ
သူ့ သူဌေးပြောပုံက ” ကားတစ်စီးဝယ်ပေးမှကျေနပ်ပါမယ် ” တဲ့...
တကယ်ဆို ဒီကိစ္စက ဒီလောက်ထိ ဖြစ်ဖို့လည်းမသင့်ပါဘူး
ဒီလိုအသက်အရွယ်မှာ အခုအဖမ်းခံရတော့သူလည်း တော်တော်ရှက်မှာပဲလေ
နောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံး အချုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှမထားချင်လို့ကတကြောင်း
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုထိန်းတာကို ရဲ လေးယောက်နဲ့ထိန်းထားပါတယ်
သူ့ သူဌေးမှာဘာအကြံအစည်များရှိနေလဲ မသိပါဘူးဗျာ..
တကယ်တမ်းတော့ နှမချင်းကိုယ်စာတတ်ရင် ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ရဲစခန်းက ခဏဆိုပြီး ခေါ်တွေ့ပြီး တစ်ခါထည်းဖမ်းချုပ်လို့မရပါဘူး
သူတို့လုပ်ပုံက အရင်ခေတ်ထောက်လှန်းရေးတွေ ခဏဆိုပြီးခေါ်ပြီး ဖမ်းချုပ်ထားသလိုပါပဲ
ဒီကိစ္စကို အသေအချာသိချင်တဲ့ Media သမား တွေ လည်း ကျွန်တော်ဆီလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/26/20140အကြံပြုခြင်း
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အစိုးရမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် အမျိုးသမီး ဆံပင်ပုံစံ ၁၈ ခု
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အစိုးရမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် အမျိုးသမီး ဆံပင်ပုံစံ ၁၈ ခုကို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တိုင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားပုံ ....
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားတွေကို အာဏာရှင်ကင်ဂျု့ အွန်ဆံပင်ပုံစံအတိုင်းညှပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် အမျိုးသားတွေ သိပ်မပျော်ကြဘူးလို့ သိရပါတယ်
အစကတော့ ပြုံယမ်းမြိဲု့ တော်က ကအမျိုးသားတွေသာလိုက်ညှပ်ဖို့ လုပ်ရာကနေ ယခုအခါ တပြည်လုံး က အမျိုးသားတွေ လိုက်ညှပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ မျက်နှာက ပုံစံရှားတဲ့ အတွက် သူနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံက ကတခြားသူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ချင်မှ လိုက်မယ်လို့ လူတွေက ပြောကြပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေသစ် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိလဲ
by Kamayut Media on March 22, 2014 at 7:34 pm
အသစ်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ဥပဒေသစ်ရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေဟာ လာမယ့် ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှာ စတင်အသက်ဝင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ၁%ကျော်လောက်ပဲ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစနစ်မှာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ပြည်သူတွေကို အစိုးရက ဘယ်လိုမက်လုံးပေးပြီး ဆွဲဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အာမခံအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် တိုးမြင့်လာသလို အသုဘစားရိတ်ကလည်း အရင် ကျပ် ၄သောင်းကနေ အခုဆို လစာရဲ့ ၅ဆအထိ တိုးမြှင့်ထားတယ်လို့ အစိုးရက ပြောလိုက်ပါပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိရနေကြ ကျပ် ၂သောင်းအစား လစာရဲ့ အဆ ၃ဝကနေ အဆ ၈ဝထိ အာမခံကြေးထည့်ဝင်တဲ့ကာအပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
UMFCCI မှာ ကျင်းပတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေသစ်ထဲ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင် အကျိုးခံစားခွင့်အကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေကလည်း အာမခံထားဖို့ ငြင်းဆန်ရှောင်ရှားကြသလို အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်း သူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ နားမလည်ကြလို့ အားလုံးမပါမနေရဖြစ်အောင် မျှော်မှန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၅၄ လူမှုဖူလုံရေးအက်ဥပဒေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အခု ဥပဒေသစ်မှာ အထွေထွေအာမခံစနစ်တွေ ကောင်းလာပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံမှုကို လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းက သီးခြားလုပ်ကိုင်တာ ထက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ရွှေသံလွင်မီဒီယာက ဆိုပါတယ်။
၁၉၅၄ လူမှုဖူလုံရေးအက်ဥပဒေဟာ ၁၉၅၆မှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ ကျန် ပြည်နယ်တိုင်းတွေက မြို့နယ် ၁ဝဝကျော်မှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတကြီးက အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်လို့ တိုက်ရိုက်စာပို့တာ ဖြစ်
“ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စက နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း ကို ဦးတည်စရာ မရှိပါဘူး၊ ဘယ်ပြဿနာ မှာဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကို အမြဲတောင်းဆိုပါတယ်၊ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးသည် အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ သဘောမတူတာတွေ ရှိတာတွေ အကျပ်အတည်းတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံရေးကို တောင်းဆိုတာပါ။ ပေါ်လာတဲ့ အခက်အခဲ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။"
“NLD က တပ်မတော်ကို လေးစားတယ်။ အားကိုးတယ်။ တကယ့် အဆင့်မြင့်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်အောင်၊ တကယ် ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူ့လူထု လိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်ပေါ်ပေါက်လာအောင် မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်။ တပ်မတော်က လွှတ်တော်ကို အများကြီး ပံ့ပိုးဖို့လိုတယ်"
“လေးဦးလုံးဆုံဖို့ တွေ့ဆုံဖို့ ကိစ္စမှာ သမ္မတကြီးက အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်လို့ တိုက်ရိုက်စာပို့တာ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူကလည်း သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် ပါတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် NLD အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စတင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ် ကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံကို သဘောမတူလို့ တခုလုံးကို ပြောင်းမယ် လို့တော့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး"
“ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင် က မပြေလည်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာပဲ အရေးကြီး တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျမကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားကို လွှတ်တော်ဘက်က ပါမှာပါ၊ ကျမ အမြင်မှာလည်း နာယကကြီးက ဖြောင်ဖြောင့်မတ်မတ်ပါပဲ"
၂၆-၃-၂၀၁၄ ၊ နေပြည်တော် ။
ဒီ ကြီးလေးကြီးမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ သူဟာ လူထုထောက်ခံမူရော နိုင်ငံ တကာရဲ့ ပံ့ပိုးမှုရော အရှိဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ နောက်တဆင့် ခြေလှမ်းဟာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် တွေအကြား ပြန်ပြီးနွေးထွေး လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ (တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုလည်း လိုပါသေး တယ်)။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဝဲဂယက်ထဲက ကြီးလေးကြီး ဆောင်းပါးမှ
အောင်ဇော် ၊ ဧရာဝတီ ဂျာနယ်
အချုပ်ခန်းထဲသို့သာ ထည့်လိုက်ပါ ဟုကိုပြုံးချို၊ မမီးမီး၊ မနီလာသိန်းနှင့် ပခုက္ကူ ဒေသခံ ၂ ဦး ကပြော
မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီတွင် ကိုပြုံးချို၊ မမီးမီး၊ မနီလာသိန်းနှင့် ပခုက္ကူ ဒေသခံ ၂ ဦး ပခုက္ကူရဲစခန်းမှာ ရောက်နေပါသည်။
by Ant Bwe Kyaw.
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများမှ ကိုပြုံးချို၊ မနီလာသိန်း နှင့် မမီးမီးတို့ ၃ ဦးအား ပခုက္ကူရဲစခန်းမှ ပုဒ်မ၁၈ ဖြင့် ယနေ့အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုလိုက်သည် ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ ကိုပြုံးချို အပါအ၀င် ရှစ်ဦး သည်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် မကွေးမြို့၊ ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ပခုက္ကူမြို့က ဘစ်ကား ၂ စီးစာ မဘသများ ကြီးမှုးသည့် ခြေဥထောက်ခံပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကိုကိုကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံမှ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲအတွက် သွားရောက် ဖိတ်ကြား